विस्तृत शान्ति सम्झौताको १५ वर्ष पूरा, के थियो दस्तावेजमा ? पूर्णपाठसहित | Seto Khabar
काठमाण्डौँ । तत्कालीन सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको आज १ ५ वर्ष पुगेको छ । दश वर्षभन्दा लामो नेपाली गृहयुद्लाई अन्त्य गरेको घोषणा गर्दै नेपाल सरकार र नेकपा माओवादीले वि.सं. २०६३ मंसिर ५ गते हस्ताक्षर गरेको सम्झौता पत्र हो बिस्तृत शान्ति सम्झौता ।